Daawo:-Sahra Diiriye Gamaadiid Oo Ka Farxisay Caruur Naafo Ah Buuhoodle - Hablaha Media Network
Daawo:-Sahra Diiriye Gamaadiid Oo Ka Farxisay Caruur Naafo Ah Buuhoodle
HMN:- Marwo/Sahra Diiriye Gamaadiid oo ka socota Ururka samofalka ah ee DUGSI ee dalka Holand ayaa subaxnimadii khamiista ee 28/07/2016 booqatay caruur naafo ah lana dacdaran xanuuno kala duwan oo ku nool magaalada buuhoodle.
Caruurtan ayaa mudooyin ku dhibaataysnaa xanuunadan iyo naafonimada rafaad bandanna waxaa la soo maray waalidkooda siiba hooyooyin iyo ayeeyooyin, caruurtan ayaa u baahan daryeel caafimaad iyo mid nololeed labadaba.
Sahra Diiriye Gamaadiid ayaa lacag sooryo ah gudoonsiisey caruurtan wuxayna ugu baaqday hayadaha samafalka iyo qurbajoogta soomaaliyeedba inay soo caawiyaan cruurtan naafada ah.
Dhanka kale ururka dugsi wuxuu tilmaamay inuu samayn doono sanduuq dhaqaale ururin loogu samaynayo caruurtan naafada ah ee reer buuhoodle.
Waalidka dhalay caruurtan ayaa mid mid uga warbixiyey dhibatada haysata ilmaha iyo wixii ay la soo mareen hawl mudadii ay xanuusanayeen, iyagoo ugu baaqay umadda muslimka ah inay so caawiyaan iyo hayadaha sama falka ee caalamku.
Ugu danbayntii gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika ee buuhoodle sh/cabdishaafi axmed cali oo goobtaa joogey ayaa hadallo wacdi ah iyo baaq waxtar ah ba ka soo jeediyey madashaas isaga oo waalidka ku tirtirsiiyey in ay ku sabraan qadarta eebe iyo in dadka wax u heli karaa ay ku ajar doontaan caawinta caruurta aan denbiga lahayn ee naafada ah.